ECOuture vintage styleCollectionKeep vintage styleloved vintage styleones vintage styleclose vintage styleto vintage styleyour vintage styleheart vintage stylewith vintage stylea vintage styleone vintage styleof vintage stylea vintage stylekind vintage stylelocket. vintage styleThe vintage stylelockets vintage styleare vintage stylevintage vintage styledeadstock vintage stylecirca vintage style1960s vintage styleand vintage stylehave vintage stylespace vintage styleto vintage styleput vintage styletwo vintage stylepictures vintage styleinside. vintage styleA vintage stylerepurposed vintage stylevintage vintage stylealuminum vintage stylebutton vintage stylewith vintage styledeep vintage styleindigo vintage styleaccent vintage styleis vintage styleatop vintage stylewith vintage stylea vintage stylelapis vintage stylestone vintage stylewirewrapped vintage styleabove. vintage styleHung vintage styleon vintage stylea vintage stylelong vintage stylediamond vintage stylecut vintage stylegunmetal vintage stylebrass vintage stylefine vintage stylecurb vintage stylechain vintage stylewith vintage stylepewter vintage stylebail. vintage styleChain vintage styleis vintage stylefinished vintage stylewith vintage stylea vintage stylespring vintage stylering vintage styleclasp vintage styleand vintage stylesignature vintage stylewire vintage stylewrapped vintage styleclosure. vintage styleOne vintage styleof vintage stylea vintage stylekind.Last vintage styleimage vintage styleshows vintage stylea vintage stylevariety vintage styleof vintage stylesome vintage styleother vintage styleone vintage styleof vintage stylea vintage stylekind vintage stylelockets vintage styleI vintage stylehave vintage styleavailable. vintage style vintage styleThis vintage stylelisting vintage styleis vintage stylefor vintage styleONE vintage stylevintage vintage styleDiamond vintage styleLocket vintage styleas vintage styleshown vintage stylein vintage stylethe vintage stylefirst vintage styleimage vintage styleof vintage stylelisting.Locket vintage stylemeasures vintage styleapproximately vintage style1.5" vintage styletall vintage styleand vintage style1" vintage stylewideLength vintage style30"